अर्थ Archives - KalaiyaLive.Com.Np
पेट्रोलको मूल्य समायोजन एक रुपैयाँ घट्यो
कलैयालाईभ	 Jun 11, 2019 149 0
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य समायोजन गरेको छ । बुधबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य समयोजन…
कलैयालाईभ	 Jun 4, 2019 44 0
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्च…
साताको शेयर बजारः चार अर्ब माथिको कारोवार
कलैयालाईभ	 Jun 1, 2019 51 0
काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा यस साता चार अर्ब ३३ करोड १६ लाख सात हजार ८२४ बराबरको शेयर कारोवार भएको छ।…
करको संरचनामा यस्तो हेरफेर, केमा घट्यो केमा बढ्यो ?
कलैयालाईभ	 May 30, 2019 260 0
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करका केही दर हेरफेर गरेको छ । राजस्व संकलनको दायरा…
यस्तो छ आगामी वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
कलैयालाईभ	 May 29, 2019 62 0
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय‚ राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ नेपाल सरकारको…
कलैयालाईभ	 May 29, 2019 91 0
काठमाडाैं। सरकारले नेपाल एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी तथा किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्यको…
पेट्रोल र डिजेलमा १ रुपैयाँ कर थपिने
कलैयालाईभ	 May 29, 2019 51 0
काठमाडौं । सडक मर्मतका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा थप रु. १ कर लिने भएको छ ।…
यार्सागुम्बाबाट २६ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन
कलैयालाईभ	 May 28, 2019 53 0
जाजरकोट। शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाले २६ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ। अघिल्लो…
कलैयालाईभ	 May 25, 2019 65 0
विराटनगर / विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा कूल रु ३१ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख ७४…
कलैयालाईभ	 May 20, 2019 76 0
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको बिषयगत समितिले आगामी बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि…